e guzobere na 2003, nke bụ ụlọ ọrụ mepere emepe na-elekwasị anya n'ọhịa nke nri nri dị elu, yana ihe karịrị afọ 10 nke mbubata na mbupụ ahia ahia na ahụmịhe ahịa ahịa bara ụba na nri nri, nke nyocha teknụzụ na mmepe ọhụụ na-akwado. ike, mmụba nke mmepụta ikike na ọnụ ọgụgụ uru, iji nweta mwekota nke ụlọ ọrụ na ugbo ala ike enterprise ọrụ usoro.
Ike nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọhụrụ nke 4.0 ọhụrụ, nke a ga-arụ ọrụ n'afọ ọzọ, nwere ike iru 500 yuan. (74 nde USD)
The ụlọ ọrụ na-eme a nnukwu otu ngwaahịa ahịa nlereanya, ọwa nkwalite kpụ ọkụ n'ọnụ ọrụ, elu ika mmata, ngwaahịa na-ere na anụ ụlọ elu-ọgwụgwụ ụlọ ahịa n'agbụ, KA na-echekwa, obodo ọpụrụiche nnukwu ụlọ ahịa, mba yinye management òtù na yinye mma na ụlọ ahịa ndị ọzọ ahịa ọwa , China si n'elu 100 mkpọsa formats nwere imekọ ihe ọnụ.
PLỌ AKWPKWỌ PLỌ
Company ọhụụ: Bụrụ ụlọ ọrụ FMCG nke ụwa.
Company Mission ika ozi: ka onye ọ bụla nwee ọ enjoyụ nke popọka!
Ọhụụ ọhụụ: ịghọ akara mbụ nke ụdị popcorn na China.
Valkpụrụ isi: iwulite nrọ ọnụ, na-elekwasị anya na ihe ọhụrụ, iguzosi ike n'ezi ihe na imekọ ihe ọnụ, na-eduga n'ịdị mma.
Popcorn isi ụdị: INDIAM
Otutu asambodo GLOBALGAP, ISO 22000.
Onu ahia di elu: (imekorita oru)
Development: New factory, ọhụrụ layout, na-akpa na China, na-amị elu ụwa.
Ọkachamara: Otu ndị ọkachamara na-ebubata ahịa na mbupụ ahịa nke ejiri ụdị ọkwa ladder wuo.
Gbado anya: niile na popcorn otu ihe, iji nweta ihe kachasị otu ihe zuru oke!
Itinye uche: Iji n'ụzọ anụ ahụ na-ebu ozi nke ika na uche na-eme ka mma na-eri-irè popcorn.
Popcorn, dị ka onye nnọchianya nke nri ọgwụgwọ, nwere ike ịbawanye ngwa ngwa nke ọgwụ nzuzo nke ụbụrụ na ụbụrụ na obere oge, na-eme ka ndị mmadụ nwee obi ụtọ, ma nwekwaa mmasị na nsị nke popcorn, bụ nri ga-enwerịrị nri maka ntụrụndụ, ikiri ihe nkiri na ịchụkwudo n’ihe ngosi TV. Na mgbakwunye, popcorn na-enweghị shei na isi ya dị mfe iri nri ma na-enye aka na ịdị ọcha gburugburu ebe obibi; popcorn nwekwara ike unlock kpọghee ekwt a ụzọ dị iche iche na-eri, enwe fun na uche.
1. Ngwongwo ahọpụtara: Indiam Popcorn ka emere site na ọka ero, sirop sirop na sirop na caramel dị elu iji wee hụ ụtọ eke na ụtọ.
2. Nlekọta Ahụike: Anyị na-eji mmanụ nkwụ nkwụ sitere na mmanụ nwere obere mmanụ nwere obere calorie wee hụ ahụ ike nke ngwaahịa anyị.
3. Eke ma na-atọ ụtọ: Healthy ngwaọrụ, gburugburu na zuru bọọlụ, crisp uto, na-enwu gbaa agba, ọ dịghị ike cores na-enweghị dregs.
4. Unique Technology: Indian popcorn emewo ka akpaka mmepụta akara, na-eji ìhè amịkpọ nkà na ụzụ, mmeba dị nnọọ mma, na obi ụtọ bụ gburugburu na zuru, slagging kpamkpam.
UBUP UNR UN UBI
Nkeji 18 maka isi ihe na-atọ ụtọ: Mgbe ọtụtụ narị nyocha gachara, usoro ịse achịcha nke 18 nkeji na-eme ka nri nke ngwaahịa ahụ na ụtọ dị egwu nke ngwaahịa dị mma.
Production Usoro nhazi Chaatị
5. na-ajụ oyi
6. minit 18 obere okpomọkụ mmiri
7. Mbukota na akara
8. Igwe jụrụ oyi
A mbụ na ala-okpomọkụ mmiri usoro ka mma uto.
Ọdịdị bụ ukwuu recognizable na obere.
Nwepụta Ahịa + orylọ Ọrụ Nwepụta + Ahịa + Ọrụ Ndị Ọrụ
Na-atụ anya na-ewu win-mmeri azụmahịa imekọ ihe ọnụ na ị!
INDIAM popcorn, Caramel popcorn, Ọka agbara agba, China Prefabricated Klas,